भोट सच्याउन मन लाग्यो भने फेरि भोट दिनुहोस्ः यस्तो छ अमेरिकी चुनाव
प्रकाशित: बुधबार, कात्तिक १२, २०७७, १४:४०:०० नेपाल समय
काठमाडौं- अमेरिकामा नोभेम्बर ३ मा राष्ट्रपति पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ। तर त्यसअघि पनि मत खसाल्न पाइने विभिन्न व्यवस्था छ।
अमेरिकाका केही राज्यमा मतदाताले मतदान गरिसकेपछि पनि आफ्नो मत परिवर्तन गर्न सक्छन्। राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले केही मतदाताहरुलाई यस्तै गर्न सुझाव दिएका छन्। निर्वाचन परिणाममा यसको असर के होला?
ट्रम्पले सुरुमै मतदान गरिसकेका धेरैले फेरि आफ्नो मत सच्याउन पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर गुगल सर्च गरेको पाइएको भन्दै त्यसो गर्न पाइने बताएका छन्। उनले ट्विट गरेर धेरै राज्यहरुमा यस्तो सुविधा भएको भन्दै मतदातालाई आफ्नो मत सच्याउन आग्रह पनि गरेका छन्।
समीक्षकहरु राष्ट्रपतिको यो अपिल निर्वाचनमा आफूले जितिदैन कि भन्ने आशंकाले आएको हुनसक्ने बताइरहेका छन्। चुनाव अभियानको सुरुदेखि नै यदि ट्रम्पले हारे भने उनले सजिलै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने छैनन् भन्ने आशंका केहीको थियो। ट्रम्पलाई यसबारेमा सोध्दा उनले कहिल्यै पनि यसलाई अस्वीकार गरेका छैनन्।
अमेरिकामा अहिलेसम्म ६.६ करोडभन्दा धेरै मतदाताले मत दिइसकेका छन्। यो सन् २०१६ को मतदानको करिब ५० प्रतिशत हो। यीमध्ये ४.४ करोड मत हुलाकबाट खसालिएको छ भने २.२ करोड निर्वाचन कार्यालयमा गएर।
प्रारम्भिक सर्वेक्षणमा मतदानको रुझान डेमोक्रेट्सको पक्षमा गएको र रिपब्लिक पछि परेको अनुमान गरिएको छ।
अमेरिकामा आफूले दिएको मत सच्याउने सुविधा केही राज्यमा मात्रै छ। ती राज्यका पनि बेग्लाबेग्लै काउन्टीमा बेग्लाबेग्लै नियम छ। विस्किन्सिनमा मतदाताले तीन पटक आफ्नो मत परिवर्तन गर्न पाउँछन् भने कनेक्टिकटमा स्थानीय अधिकारीको स्वीकृति लिनु पर्छ।
केही राज्यमा मत निश्चित मितिमा मात्रै परिवर्तन गर्न सकिन्छ, केही राज्यमा भने मतदानको दिनसम्म यस्तो गर्न पाइन्छ।
कतिपय ठाउँ मत परिवर्तन गर्ने कानुन संशोधनबारे अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ।
सोमबार जब ट्रम्पले मनोनित गरेकी न्यायाधीश जज एमी कोनी बैरिटको सुप्रिम कोर्टमा नियुक्ति भयो, त्यसै दिन अदालतले यस्तै एक मुद्दामा फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसला अनुसार विस्कन्सिनमा तीन नोभेम्बर पछि हुलाकबाट प्राप्त मतको गणना हुने छैन।
अहिलेसम्म अमेरिकाको अवस्था हेर्दा ट्रम्प र बाइडेनबीच ठूलो मतान्तर नहुने अवस्थामा मतगणना जटिल र लामोसमयसम्म चल्न सक्ने देखिन्छ।
अस्पतालबाट फरार सम्झना विकका हत्या आरोपित ७ घण्टापछि पक्राउ, तीन प्रहरी निलम्बित
गाँजामाथिको प्रतिवन्ध हटाउनु पर्ने पक्षमा नेपालको मतदान
१२ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गर्ने किशोर कारागारबाट फरार
नारायण गोपाल बिनाका ३० वर्ष
कोरोनाका कारण रोकियो इच्छाकामना पञ्चमी मेला
सरकारसँग सर्वोच्चकाे जवाफ माग- ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ किन नलेख्ने ?
यूरोपा लिगमा आर्सनलको जित, लेस्टर सिटी पराजित
घरसँगै जल्यो साह परिवारको सपना
१ अस्पतालबाट फरार सम्झना विकका हत्या आरोपित ७ घण्टापछि पक्राउ, तीन प्रहरी निलम्बित
२ गाँजामाथिको प्रतिवन्ध हटाउनु पर्ने पक्षमा नेपालको मतदान
३ १२ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गर्ने किशोर कारागारबाट फरार
४ यूरोपा लिगमा आर्सनलको जित, लेस्टर सिटी पराजित
५ नारायण गोपाल बिनाका ३० वर्ष
अमेरिका : सफा सहरभित्र फोहोरी बानी
प्रधानमन्त्रीलाई गगनको चेतावनी– पौडेल पक्राउको घटना तपाईँका लागि निकै महँगो पर्नेछ
दूधको खाली प्याकेट के गर्नुहुन्छ ? बाबुकाजीलाई दिनुस्
पौडेलको गिरफ्तारीपछि देउवाले भने– सर्वसत्तावादको संकेत, देशभर प्रतिरोध गरिन्छ
तनहुँका प्रजिअ भन्छन्- पौडेलले निषेधित घेरा तोडेकाले नियन्त्रणमा लिएका हौँ
सुशासनका लागि खुला सरकार साझेदारी
व्यावसायिक र समावेशी टिम भएकाले हामी चुनाव जित्छौं : चन्द्रप्रसाद ढकाल (अन्तर्वार्ता)
लामो अनुभव र सबैको साथले म जित्छु : किशोर प्रधान (अन्तर्वार्ता)